Zandary maty tany Fianarantsoa : “Fiaran’olona ambony, akaiky ny mpitondra no nandona azy”, hoy ny havany | NewsMada
Zandary maty tany Fianarantsoa : “Fiaran’olona ambony, akaiky ny mpitondra no nandona azy”, hoy ny havany
Milaza ny havan’ny zandary maty tany Fianarantsoa, fa novonoina ny havany. Fiaran’olona akaiky ny fitondrana nandona azy, izay tsy notanan’ny zandary hatramin’ny mpamily. Mitaky ny marina ireo fianakaviana.
Nametraka fitoriana eto Antananarivo ny fianakavian’ilay zandary mpitaingina bemôtô maty tany Fianarantsoa, ny 28 janoary lasa teo, noho ny fiheveran’izy ireo fa maty nisy namono ny havany fa tsy matin’ny lozam-pifamoivoizana. “Tsy hita ny fiara voalaza fa nandona, tsy notazonin’ny zandary ny saofera. Aiza ny fiara sy ny mpamily”, hoy ny rahalahin’ilay zandary maty, Atoa Lercia. Araka ny fanazavana mantsy, fantatra fa an’olona ambony, akaiky ny mpitondra ny fiara 4×4 voalaza fa nandona ilay zandary. “Tsy nanome fitanana an-tsoratra ny zandary. Manafina ny zandary sa inona ny antony?”, hoy ihany ireo fianakaviana.
Fanampin’izay, lazain’Atoa Lercia fa tsy nisy mihitsy ny taratasy fanambaram-pahafatesana sy ny antony nahafaty an’ilay zandary azon’izy ireo hatramin’izao. “Tapaka avokoa ny taolana rehetra, nahitana lavaka tahaka ny loakan’ny bala ny tendany”, hoy ihany izy.
Raha tsiahivina ny tantara, zandary bemôtô niaraka tamin’ny namany, nanao asa fanakanana fiara izy io, ny 28 janoary lasa teo. Nandalo ilay fiara io, ary tamin’izay no voalaza fa voadona izy ary nitarika ny fahafatesany izany. Voalaza fa nentina tany amin’ny hopitaly ary tsy tana ny ainy.
“Hafahafa ny fomba nahafaty azy. Nanaitra ihany koa ny filazan’ny kolonely roa fa tokony hahery ary tsy maintsy hipoitra ny marina”, hoy i Lercia. Mihevitra ireto fianakaviana fa ho hita ny marina eto Antananarivo, izay indrindra no antony nampidirana ny fitoriana eny amin’ny fitsarana Anosy. Milaza tsy hanaiky hatramin’ny farany rahateo izy ireo.